Fitaovan'ny Pterostilbene roate (537-42-8) - Phcoker
Ny vovobony Pterostilbene dia antioxidant izay mipoitra voalohany indrindra amin'ny akoho amam-borona, voaloboka ary karavato mena. Pterostilbene .......
Vovonam-borona vita amin'ny Pterostilbene (537-42-8)
Ny Pterostilbene roatin-dite roanina dia azo avy amin'ny natoraly voajanahary azo ampiasaina amin'ny resveratrol, miaraka amin'ny antioxidant, anti-inflammatoire, pro-apoptotika, antineoplastika ary cytoprotective activity. Amin'ny fampiasana azy, ny poezia Pterostilbene Raw dia mampiasa ny asany manohitra ny oksigène amin'ny alàlan'ny fanesorana karazam-borona oksizenina (ROS), ka manakana ny fahasimban'ny toaka sy ny fanimbana sela ROS. Azo atao koa ny manasongadina ny fototry ny nokleary 2 (2) mifandraika amin'ny 2 (Nrf1) -fampahalalam-baovao ary mampitombo ny fanehoana an-tsokosoko ho an'ny antioxidant, toy ny superoxide dismutase (SOD). Ankoatra izany, ny poezia Pterostilbene Raw dia afaka manakana ny areti-maso amin'ny fampihenana ny fanehoana ny mediators isan-karazany, toy ny interleukin (IL) XNUMXbeta, ny tahaoro necrosis factor alpha (TNF-a), ny indostable oxidase synthase (iNOS), cyclooxygenases (COX) , ary ny kamera B (NF-kB) nokleary. Manakana na misoroka koa ny fampidirana ireo lalan-tsiansa maro voakasika amin'ny karzônôzôesezina, ary mampitombo ny fanehoan-tsiram-pandrosoana maro samihafa ary mampihena ny fanehoana ny sekta sasany izay mampiroborobo ny fototarazo. Izy io koa dia mitarika mivantana ny apoptose ao amin'ny sela tumora.
Rojo Pterostilbene roate (537-42-8) Specifications
Product Name Rojo Pterostilbene vovoka
Anarana simika Pderostilbene Rohe;
molekiolan'ny Formula C16H16O3
molekiolan'ny Wvalo 256.301 g / mol
Application Anarana iombonana amin'ny teny estoniana Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny estoniana
Rohamena Pterostilbene (537-42-8) Description
Ny Pterostilbene dia molekilan'ny molekiola milevina izay misy fitoviana mitovy amin'ny resveratrol, ny fahasamihafany dia roa methoxy amin'ny molekiolan'ny pterostilbene izay manolo ny vondrona hydroxy amin'ny molekiolan'ny resveratrol. Na dia azo ampitahaina aza ny ankamaroan'ny fihetsik'ireo roa ireo, dia toa mihamangatsiaka kokoa ny pterostilbene aorian'ny fampidirana am-bava ary mety ho molekiolan'ny antioxidant sy anticancer kokoa.
Ny fianarana iray ihany no nandinika ny pterostilbene ho an'ny olombelona. Nahitana fitomboan'ny kolontsaina LDL sy ny fironana mankany amin'ny ambaratonga avo lenta avo lenta amin'ny olona manana cholesterol avo lenta izay nandray 100 na 250 mg isan'andro. Tsy fantatra hoe raha miteraka tsindry ny tsindrona ambany ny doka ambany, saingy ny fihenan'ny vondron'olona izay nitondra ny dosie ambony dia nahomby.
Pterostilbene vovoka (537-42-8) Mechanism of Action
Ny pterostilbene dia miady amin'ny fihanaky ny oksidena amin'ny fanarenana ny antioxidant enzymes. Mampitombo ny superoxide disutase 1 (SOD1) sy peroxiredoxin-4 (PRDX4), izay mamehy ny karazam-borona oksizenina. Ny mpikaroka dia nahatsikaritra izany fiantraikany eo amin'ny masoin'ny olombelona izany, ka nanipika fa ny pterostilbene dia mety hiaro amin'ny fahasimbana oksidia. Ankoatr'izay, Pterostilbene koa dia manazava ny lalan-tsoratra SIRT1 izay miaro amin'ny fahavoazana simika. Ity lalana ity dia mampitombo ny fanehoana ny p53, proteinina iray miaro ny ADN ary manakana ny fifindrana mety hitarika amin'ny homamiadana.
Aolthough SIRT1 dia mety hiaro amin'ny fahasimbana sy fahasimbana izay mitranga rehefa mihantitra isika. Na izany aza, pterostilbene dia tsy fanafody mahagaga amin'ny fahanterana.
Maro ny fanadihadiana no nanaporofo fa ny pterostilbene dia mampihena ny tsindrona mifehy ny tadidin'ny necrosis-alpha (TNF-alpha). Ny tsindry bokotra dia miteraka fanafody; Ny pterostilbene dia afaka manakana ny TNF-alpha sy interleukin-1b (IL-1b) amin'ny fampihenana ny karazam-borona oksizenina.
Ny pterostilbene koa dia manakana ny fikorontanana ao anatin'ny ampahany amin'ny fitaovana finday antsoina hoe endoplasmic reticulum, na ER. Tao anaty fandalinana iray, rehefa nipoitra tamin'ny pterostilbene ny sela avy amin'ny fantsakan-dranomasina, dia tsy namaly ny fampitam-baovao izy ireo, ary tsy nanjary narehitra.
Ny Pterostilbene dia manana vahaolana goavana amin'ny fanoherana ny homamiadana. Mety hiaro ny sela salama izy ary manimba sela sela. Ao amin'ny glioma (kanseran'ny atidoha na kansera), ny pterostilbene dia nidina Bcl-2 ary nitombo Bax; Ireo fiovana ireo dia mampitombo ny sela "hamono tena" ary mahatonga ny sela glioma ho faty.
Ny pterostilbene dia toa manintona mifantoka amin'ny faritra hippocampus ao amin'ny atidoha. Ao izy io, dia mitombo ny fatran'ny neurotrophic (BDNF), ny proteinina kininina (MAPK) miaraka amin'ny proteinina (mAPK), ary ny proteinina (CREB) misy valiny. Ireo proteinina telo ireo dia manampy ny neurons mitombo, mihabetsaka ary mamaly ny manodidina azy. Ny antidepressants SNRI matetika no manasongadina ireo lalana ireo koa. Ao amin'ny hippocampus koa, ny pterostilbene dia mampitombo ny proteinina antsoina hoe Nrf2, izay mampitombo ny fanehoana proteinina antioxidant.
Ny oksidas monoamine, MAOs, dia ny anzima izay mamotika ny neurotransmitters ao amin'ny atidoha. Ny iray amin'ireo enzymes ireo, MAO-B, dia mamotika ny dopamine; Vokatr'izany, ny fanafody izay manakana ny MAO-B hampitombo ny dopamine ao amin'ny atidoha. Araka ny fikarohana iray vao haingana, ny pterostilbene dia manakana ny asan'ny MAO-B ary manatsara ny dopamine azo.
Ny poezia Pterostilbene dia mety hanakana ny aretin'i Alzheimer amin'ny fiarovana ny atidoha amin'ny beta-amyloid (Aβ). Ny lalana marina dia tsy fantatra, fa toa hita fa misy PI3K sy Act, proteinina roa izay manohana ny fitadidiana, ny fianarana, ary ny fivoaran'ny neuron.
Use ny pterostilbene (537-42-8)
Fanohanana ny insuline
Pterostilbene Recommended (537-42-8) Dosage
Ao amin'ny olombelona, ​​ny doses hatramin'ny 250 mg isan'andro dia heverina ho azo antoka. Ny diplaoma ambony toy ireo dia naseho tamin'ny fampihenana ny tsindrimpeo ary hampiroborobo ny fihenam-bidy. Nihanitatra be koa ny tahan'ny kolesterola LDL, saingy tsy niova mihitsy io vokatra io tamin'ny fampidiran-tsakafo.
Ao amin'ny biby, be dia be ny tsiranoka kely. Miaraka amin'ny 1 sy 2 mg isaky ny lanjan'ny vatana isan'andro isan'andro dia mampihena ny fanahiana amin'ny totozy. Amin'ny fampiasana fomba fanisana mitovy amin'ny totozy amin'ny totozy sy ny olombelona, ​​ny dose fanombohana (mg) ho an'ny olona dia ny lanjany amin'ny kila nozarain'ny 12.3. Izany dia miompana amin'ny:
4.6 mg / andro ho an'ny olona iray 125
5.5 mg / andro ho an'ny olona iray 150
6.5 mg / andro ho an'ny olona iray 175
7.3 mg / andro ho an'ny olona iray 200
Raha mandray ny vovobony pterostilbene ianao noho ny tombon-tsainy, azonao atao ny manomboka amin'ny doka tena ambany. Na dia izany aza, ny fihenan-tsakafo toy izany dia tsy hita afa-tsy amin'ny totozy tody hatramin'izao, ary ny olona dia mety tena mahafinaritra ny soa entin'ny cognitive amin'ny dose ambony.
Ny soa azo avy amin'ny voly Pterostilbene (537-42-8)
Ny poezia Pterostilbene dia antioxidant izay misy aloha, manana chemopreventive, antiinflammatory, antidiabetic, antidyslipidemic, antiatherosclerotic and neuroprotective effects. Ankoatra izany, manana tombony vitsivitsy ihany koa izy:
Manampy amin'ny ady amin'ny homamiadana
Manatsara ny fahalalana ary manakana ny fahafatesan'ny sela ao amin'ny atidoha
Mampihena ny sotro ra
Arovy ny foza
Miaro ny fo
Afaka manohana ny fidiram-bidy
Miaro ny maso
Afaka mitombo ny fahamendrehana
Mandroso ny tsindrim-peo
Rao 9-methyl-9H-beta-carboline poids (2521-07-5)